K-Pop idol တွေဆိုတာ အဆို၊ အက၊ သရုပ်ဆောင် ဘက်စုံကျွမ်းတဲ့သူတွေပါ။ တချို့ idol တွေကတော့ အကပါရမီရှိပြီး အမျိုးမျိုးသော dancing style တွေကို သင်လွယ်မှတ်လွယ်တတ်မြောက်ကြပါတယ်။ အများစုကတဲ့ အက style တွေဟာ Ballet,Contemporary, Hip Hop, Jazz, Tap Dance အစရှိတဲ့ အက style တွေ ဖြစ်ပြီး Pole dance လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်ပတ်အကကိုတော့ကဖူးတဲ့သူက နည်းပါတယ်။
ထိုအကဟာ သိမ့်မွေ့ပြီး ပျော့ပျောင်းမှ ကလို့ရတာပါ။ အခန့်မသင့်ရင် ခြေချော်လက်ချော်ပြီး ပြုတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ idol တွေဟာ သူတို့ရဲ့ music video တွေမှာ ထည့်ပြချင်တာကြောင့် တမင်သင်ယူပြီး ကခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဝါသနာအရ သင်ထားကြတာပါ။ Pole dance က ဖူးသူ idol (6) ယောက်ကို ခုလို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
3rd Generation ရဲ့ Kpop Dancer Queen “lisa” ကတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး solo album “Lalisa” သီချင်းမှာ အရည်အချင်းမျိုးစုံကိုပြသခဲ့တာပါ။ Pole dance ကို လည်း စိန်ခေါ်သင်ယူခဲ့ပြီး MV ထဲမှာပါ ထည့်က ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အကဆရာမ Cho In Young ဟာ Lisa က ခုမှစသင်တာဖြစ်ပေမဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း အမှားအယွင်းမရှိ လိုက်ကနိုင်လို့ အံ့အားသင့်မိကြောင်း ချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။
CL ကတော့ “Baddest Female” ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထိုက်တန်သူ အကြမ်းစား Queen ကြီးပါ။ variety show တခုဖြစ်တဲ့ “Livin’ the Double Life” မှာ pole dance class ကို သွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတာမို့ စစချင်း အခက်အခဲရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ခပ်မြန်မြန်သင်ယူနိူင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တခြားအကသမားတွေနဲ့ ဟာမိုနီဖြစ်စွာ တူတူလိုက်ကနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
3. Yuju (GFRIEND)
GFRIEND အဖွဲ့ဝင် Yuju က နဂိုထဲက Pole dance က ရတာ ဝါသနာပါသူပါ။ သူမ acc မှာလည်းdancing skill video တွေ ခဏခဏ တင်ဖူးပါတယ်။ GFRIEND အဖွဲ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ MTV “MAGO” ထဲမှာလည်း Pole dance ကို ကပြခဲ့ပါတယ်။
Super Junior အဖွဲ့ဝင် Eunhyuk ဟာလည်း သူ့ရဲ့ dancing skill တွေကြောင့် နာမည်ကြီးသူပါ။ ယောကျာ်းလေးဆိုပေမဲ့ Pole dance ကို ကပြနိုင်ကြောင်း “Strong Heart” talk show မှာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ တိုင်ထိပ်ထိကို တက်သွားပြီး ဝမ်းဗိုက် ကြွက်သားနဲ့ ခြေထောက်ကိုဘဲအားပြုထားရင်း လက်လွှတ်ပြီး နေပြခဲ့ပါတယ်။
Bam Bam ဟာလည်း တခါက dance studio မှာ pole dance ကို ဘုမသိဘာမသိနဲ့ သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ Yugyeom က လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အကခန်းထဲရောက်မှ တိုင်ပတ်အကကို ကရမှာဖြစ်ကြောင်း bam bam က သိသွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရောက်လက်စနဲ့ bam bam က ရအောင် သင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တာတော်လွန်းလို့ အကဆရာမ က တောင် ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
6. Jia (Miss A)
Jia ဟာလည်း variety show ဖြစ်တဲ့ Star King မှာ တိုင်ပတ်အက ကဖူးပါတယ်။ သူမရဲ့ သိမ့်မွေ့တဲ့ကဟန်နဲ့ ကြည့်ရှူသူပရိတ်သတ်တွေရော အစိအစဉ်မှူးတွေကို အံ့အားသင့်အောင် ပြုစားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးက သူမအရည်အချင်းအတွက် လက်ခုပ်ဩဘာတီးခဲ့ပါတယ်။
Next မွေးနေ့အတွက် အထူးအနေနဲ့ Wu Yifan စားခွင့်ရခဲ့တဲ့ ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာက အစားအသောက်တစ်ခု »
Previous « ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ LIVE လေးမှာ Anti Fan တွေ နှောင့်ယှက်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ Zhao Lusi